Oko Djokovic Vs Tsitsipas Live Stream: Olee otú Iji Lelee The Free Roland Garros Semifinal Site n'ebe ọ bụla - 【The Comparison】
Djokovic vs Tsitsipas Live stream: otu esi lelee ọhụụ Roland Garros n'efu site na ebe ọ bụla
Seeded Novak Djokovic gafere otu ntutu nwere nkeji iri na asatọ iji wee setịpụ penariti na mkpụrụ nke ise Stefanos Tsisipas maka ebe na Roland Garros nke ikpeazụ. Anyị ga-egosi gị otu esi ebi ndụ iyi Djokovic na Tsitsipas maka n'efu na Roland Garros taa, ebe ọ bụla ị nọ.
Djokovic agabeghị na semifinal. Ọ bụghị ụwa. 1 na-egwuri egwu na eriri olu ya n'olu ma tụfuo usoro mbụ nke asọmpi ahụ na Pablo Carreño Busta na agba ikpeazụ. Ọ kpọpụrụ physio na ụlọ ikpe iji ịhịa aka aka ekpe ya mgbe ọ gafesịrị n'azụ, tupu ya edebe onwe ya iji merie usoro atọ n'usoro.
Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas ndụ
Djokovic na Tsitsipas na-eso Nadal na Schwartzman n'ụlọ ikpe Philippe Chatrier taa, yabụ na mmalite oge ga-adị ihe dịka elekere ise nke mgbede obodo / 5pm BST. Ọ bụrụ na ị dabere na UK, ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịlele egwuregwu ahụ n'efu na ITV4 na weebụsaịtị ITV, ị nwere ike ile ya ma ọ bụrụ na ị nọ mba ọzọ na VPN. Anyị na-akọwa otú n'okpuru.
Djokovic nwere ike na-egwuri egwu na nhụjuanya, nleghara anya ya na-atụ aro na ọ ga-abụrịrị, mana ọ bụ ihe anyị ahụla ndị Serbia ọtụtụ oge n'oge ọrụ ya niile mgbe ha na-adọkpụ.
Njem Tsistipas site na asọmpi ahụ sochiri usoro dị iche. Nwa nke 22 hụrụ onwe ya na njedebe nke mkpochapu na nke mbụ, mana elebeghị anya azụ kemgbe, na-emeri ụdị ọ bụla ọ na-egwu kemgbe ahụ. Mmeri ọhụụ ọ kachasị dị ịtụnanya bụ ụyọkọ ezumike nká nke mkpụrụ iri na atọ Andrey Rublev.
Ndị Serbia na Grik ezutela ugboro ise tupu mgbe ahụ, Djoko na-eduzi usoro 3-2, ọ meriri naanị oge ha zutere na ụrọ. Tsitsipas emebeghị ka ọ gafere Slam ọkara ikpeazụ tupu, mana, na-eweda ala ka ọ dị, Djokovic anọghị ebe a na-apụghị imeri emeri n'oge ikpeazụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba bọọlụ tenis, ị chọghị ịhapụ iyi iyi nke Djokovic na Tsitsipas. Ya mere, gaa n'ihu ịchọpụta nhọrọ nlele zuru oke na ebe ị nwere ike ịlele tennis na Roland Garros.
2 Etu esi agbasa ndụ Djokovic na Tsitsipas na mba ọzọ
3 Esi lelee Djokovic vs Tsitsipas maka n'efu na UK
4 Uzo esi ebi ndu iyi Djokovic na Tsitsipas na Australia
5 Etu esi lelee Djokovic na Tsitsipas na Roland Garros na United States
Na UK TV ị nwere ike ịnweta mgbasa ozi ndụ nke French Open na-ekele ITV4 na ọrụ ya na ITV Hub gụgharia, nke dị site na ihe nchọgharị weebụ gị ma ọ bụ dịka ngwa maka igwegharị, mbadamba, igbe ndị edoziri, họrọ TV. ekwentị, consoles na ndị ọzọ.
Etu esi agbasa ndụ Djokovic na Tsitsipas na mba ọzọ
Mana ọ bụrụ na ị nwaa inyocha mkpuchi ime ụlọ gị site na ọnọdụ dị na mpụga obodo gị, ị ga-abanye na nsogbu n'oge na-adịghị anya: geoblocking. Nke a bụ ebe onye mgbasa ozi na-egbochi gị ikiri mgbasa ozi ha si mba ọzọ. Ọ bụ nsogbu nkịtị maka ndị na-egwu egwuregwu gburugburu ụwa. N'ụzọ dị mma, enwere ngwọta dị mfe n'ụdị VPN.
Esi lelee Djokovic vs Tsitsipas maka n'efu na UK
A na-agbasa 2020 French Open na UK na ọwa ITV4 n'efu, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịkwanye ya site na iji usoro ITV Hub nke ọwa ahụ. Nwere ike ịtụ anya ịhụ Djokovic na Tsitsipas n'ọhịa tupu mgbe elekere anọ nke mgbede taa.
Ọ bụrụ na ị si UK mana ị nọghị n'ụlọ n'oge a, ị nwere ike nweta azịza Roland Garros gị site na ịzụta VPN.
Uzo esi ebi ndu iyi Djokovic na Tsitsipas na Australia
Djokovic na Tsitsipas ga-efekwa maka n'efu na Australia. Gbanye na SBS n'ihe dị ka elekere abụọ nke ụtụtụ, cherezie Novak na Stefanos ka ha banye n'ọhịa. Ndị na-ekiri nwekwara ike iji ọrụ nkwanye n'efu SBS On Demand na-akụ na.
Ndị debanyere aha egwuregwu Kayo ga-enwe ike ịkọ omume niile dị ka ọ na-eme kwa ụbọchị. Egwuregwu Egwuregwu Kayo na-efu € 25 kwa ọnwa ma nye ndị ọrụ ohere ịbawanye na ngwaọrụ abụọ n'otu oge, ebe Kayo Sports Premium plan na-enye iyi iyi atọ maka € 35 kwa ọnwa.
Ọ baghị uru ikwu, nke a na-eme ka ọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọzọ tenis Fans, na Kayo na-enye oge nnwale n'efu ka ị wee lelee akụkụ nke ihe omume ahụ n'efu.
Etu esi lelee Djokovic na Tsitsipas na Roland Garros na United States
Egwuregwu a na-adọrọ mmasị ga-amalite na 11 nke ụtụtụ ET / 8 am PT na United States.
NBC Egwuregwu na Tenis Channel na-egosi ihe sitere na Roland Garros. Ọ bụrụ n’inwee egwuregwu NBC na USB, ị dịla njikere ịga ma lelee egwuregwu tennis Roland Garros site na webụsaịtị webụsaịtị; naanị banye na nkọwa ndị na-eweta TV gị.
Na Canada, ị nwere ike ịlele French Open na TSN na Bekee ma ọ bụ na RDS na French, mana ndị a bụ ọwa kachasị nke na-ejikarị ngwugwu TV akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ n’inweta ha dịka akụkụ nke nkwekọrịta USB gị, ịnwere ike ịbanye na nkọwa kọntaktị nke ndị na-eweta gị ma nweta iyi nke Roland Garros.
Ọ bụrụ na ịnweghị eriri, ịnwere ike ịdenye aha na ntanetị TSN ma ọ bụ RDS naanị site na ca € 4,99 kwa ụbọchị ma ọ bụ (uru ka mma) better 19,99 kwa ọnwa.
Onye mgbasa ozi gọọmentị maka Roland Garros na New Zealand bụ Sky Sport, nke na-efu .31,99 XNUMX kwa ọnwa ma gụnye ọwa ndị a raara nye bọọlụ, rugby, cricket na golf.
Maka nkwanye mkpanaka, ịnwere ike ijikọ site na ngwa Sky Go, ma ọ bụrụ na ịnọghị na New Zealand ugbu a, ịnwere ike iji VPN weghara mkpuchi TV nke ụlọ gị.